ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ဝန်ထမ်းများရဲ့ ခံစားချက် | ဒီရေ
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ဝန်ထမ်းများရဲ့ ခံစားချက်
လုပ်ကြပါအုံးဗျို့ ကထိန်ထဲကတောင် ဝေစုစားနေလို့
ဗဟိုဝန်ထမ်း တက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)၌ ၅.၁၁.၂၀၁၁-စနေနေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ကထိန်ပွဲတွင် ကထိန်ကျ ရာကျောင်းသို့ ပဒေသာပင်များ အကုန်မပို့ဘဲ လ.ပ.ခ ကထိန်ပို့ရန်ဟုပြောပြီး ပဒေသာပင်များကို ပုံပါအတိုင်း ပတ္တမြား ခန်းမတွင်သိမ်းဆည်းထားကာ ၁၄.၁၂.၂၀၁၁ နေ့မှ ဘယ်မှမပို့ဘဲ ပါမောက္ခချုပ် ဦးညီညီစံ နှင့် အခြားလူကြီးများအား ခွဲဝေလှူဒါန်းလိုက်ရပါသည်။ အလှူထဲကတောင် ဝေစုတောင်းစားနေသော ပါမောက္ခချုပ်နှင့်လူကြီးများအကြောင်း နိုင်ငံ တော်သမ္မတကြီး သိရှိရန် တိုင်ကြားအပ်ပါသည်။ (ပြိတ္တာ မဖြစ်စေချင်သူ)
အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားပေး စေခိုင်းနေလို့
ကျနော်တို့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၏ ပါမောက္ခချုပ် ဦးညီညီစံ သည် အထက်ပုံပါ ဗဟိုကင်းပတ် လမ်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလဆန်းမှစ၍ (မေလ) ယနေ့အထိ ကျနော်တို့ရဲများအား အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားပေးစေခိုင်းနေ ပါသည်။ ကျနော်တို့ ရဲများနှင့် အခြားဝန်ထမ်းများကို အတင်းအဓမ္မ လုပ်အားပေးစေခိုင်းခြင်းမပြုရန် ညွှန်ကြားချက်ရှိ သော်လည်း ယခုအခါ ဝန်ကြီးနှင့်ပိုင်တယ် တိုင်ချင်ရာတိုင်ဆိုပြီး အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေး စေခိုင်းနေပါသဖြင့် အရေးယူ ပေးပါရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအား အသိပေးတိုင်ကြားအပ်ပါသည်။ (ရဲဝန်ထမ်းတဦး)
ကျနော်ဟာ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်) မှာ လာရောက်အလုပ်လုပ်နေသော တိုင်းဆောက် (တိုင်း ဆောက်လုပ်ရေး ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း) မှ အလုပ်သမားတဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ၁.၅.၂၀၁၂ နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ရုပ်ပုံပါတီရှပ် ဝတ်၍လာရာ တပ်ရဲများရောက်လာပြီး အင်္ကျီချက်ချင်းချွတ်ခိုင်းပါသည်။ ပြန်လည်မေးမြန်းရာ ပါချုပ်(ဦးညီညီစံ)က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါ တီရှပ် ဝတ်ခွင့်မပြုဟုပြောပါသည်။
၁။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါတီရှပ်ကို နိုင်ငံတော်က ဝတ်ခွင့်မပြုတာပါလား?
၂။ ပါချုပ် (ဦးညီညီစံ) က မဝတ်ရဟု အမိန့်ပေးနိုင်ပါသလား?
၃။ မိမိကျောင်းဝန်း (ဗ.ဝ.တ) ထဲမို့ အမိန့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် ဘာ့ကြောင့်ပေးတာပါလဲ?
၄။ ကျနော့မှာ နိုင်ငံရေးလည်းနားမလည်ပါ ဗိုလ်ချုပ်ကိုချစ်လို့ ဝတ်မိပါတယ် မိမိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကို ချစ်လို့ဝတ်မိတာ အပြစ်ရှိပါသလား? (တိုင်းဆောက်လုပ်ရေးမှ အလုပ်သမားတဦး)
ကျနော်တို့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) လိုင်းခန်းများတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓါတ်ပုံ လုံးဝမချိတ်ရ ဟု ပါချုပ် (ဦးညီညီစံ) က အမိန့်ပေးပြီး တပ်ရဲများ အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်လံဖြုတ်သိမ်းခိုင်းနေပါသည်။ မဖြုတ်လျှင် အလုပ်ဖြုတ်ပစ်မည် အလုပ်ပြုတ်ချင်သလားဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုပြီး ခိုးချိတ်ထားတာတွေ့ပါက အလုပ်ဖြုတ်ပစ်မည် ပြောပါသည်။
နိုင်ငံတော် သမတကြီးနှင့် လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ချီတက်ရာဝယ် လွှတ်လပ်စွာ ပြောဆို၊ ရေးသား၊ လုပ် ကိုင်နိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု ပြောဆိုပါလျှက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓါတ်ပုံလုံးဝမချိတ်ရဟု ပြောဆိုနေခြင်းသည် “ဘယ်လို ဒီမိုကရေစီလဲ ?” ဤသို့ပြောဆိုနေသော ပါချုပ် (ဦးညီညီစံ) ကိုရော ဒီမိုကရေစီစနစ်သစ် ချီတက်ရာဝယ် ထားသင့်ပါ သလား?
အချို့ စစ်တပ်လိုင်းခန်းများနှင့် အစိုးရဧည့်ဂေဟာများတွင်ပါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓါတ်ပုံ ချိတ်ကြပါသည်။ ကျနော်တို့ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) လိုင်းခန်းများတွင် မချိတ်ခိုင်းခြင်းမှာ အတော်မတရားပါသဖြင့် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများ သိစေရန်တိုင်ကြားအပ်ပါသည်။ (ဝန်ထမ်းတဦး)
source by :နေ့သစ်